Doolshada boorashka leh tufaax iyo sabiib | Cunnooyinka jikada
Maria vazquez | 22/05/2021 10:00 | Postres
Guriga dhexdiisa waxaan caadeysanay inaan ku kari karno macmacaanka iyadoo aan lagu darin sonkor ama sonkor aad u yar, in kastoo kama quusanno fasalada mar mar. Bari keega dufanka leh tufaax iyo sabiib Waa mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee aan isku daynay. Keeg aad ku dari karto cuntadaada, xitaa haddii aad khudrad tahay.
Kani maahan keeg isbuunyo; Waa keeg isbuunyo qaro weyn leh. Keeg isbuunyo ah oo leh xaddiga ugu yar ee sonkorta ah, oo tufaaxa iyo sabiibku ku daraan macaan. Ama waa, haddii aad doorato noocyo macaan iyo gogo 'bislaaday. Ha ka baqin inaad ku darto ilaa laba tufaax haddii aysan aad u weyneyn!
Koob quraac ah waa waxa kaliya ee aad ugu baahan tahay inaad wax ku qabato. Ma aha keeg si aad ah u kacaya, laakiin way ballaaran tahay in 6 qof ay ku raaxaystaan ​​jeex. Waana wax kafiican inuu bunni badan maxaa yeelay laga bilaabo maalinta labaad ee keydinta way adkaataa. Miyaad ku dhiirrataa inaad diyaarsato?
Keeggan boorashka leh tufaaxa iyo sabiibku wuxuu leeyahay sonkor aad u yar wuxuuna ku habboon yahay quraac ahaan ama inuu shaqo u aado kuna raaxeysto subaxa dhexe qaxwo.
Nooca cuntada: Macaan
Waqtiga karinta: 35 m
Wadarta waqtiga: 50 m
1 koob oo bur dhan ah
1 koob oo miro duudduuban
2 qaado oo panela ah
½ on of khamiirka kiimikada
Qaaddada shaaha oo ah 1
Sacab sacab ah
1 koob oo boorash ah ama cabitaanka yicibta
2 tufaax oo yaryar, bisil
Waxaan kululeyneynaa foornada illaa 180ºC iyo dufan ama xariijin caaryo.
Kadib, baaquli, waxaan isku daraan walxaha qalalan: bur, miro, sonkor, khamiir, qorfe iyo sabiib. Waxaad ku samayn kartaa spatula ama qaadada.
Marka la isku daro, waxaan ku darnaa caano iyo saliid oo mar labaad ayaan isku qasnaa illaa aan ka gaarno cajiinka isku midka ah.
Kadib Ku shub cajiinka caaryada oo waxaan dul saarnaa tufaaxa diiray oo jarjaray, innagoo xoogaa ku cadaadineyna si aan ugu soo bandhigno qeyb ahaan cajiinka.
Waxaan geynaynaa foornada oo waxaan karineynaa 35 daqiiqo. Waxaan hubineynaa inay sifiican uqabsoontay iyo hadii ay tahay, waxaan daminnaa foornada oo waxaan kusiineynaa mudo 30 saacadood isla foornada oo leh albaabka.
Si loo dhammeeyo, Kala bixi keegga boorashka dushooda oo ha u qaboojiyo gebi ahaanba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Postres » Keega boorashka leh tufaax iyo sabiib